'हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा हामी डा. केसीको साथमा' | Nagarik News - Nepal Republic Media
मोनिका मल्ल ८ आश्विन २०७७ १ मिनेट पाठ
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा बिहीबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ। डाक्टर केसीका सबै मागहरु पूरा गर्नुपर्ने र उनको जीवन रक्षा गर्नु पर्ने भन्दै समर्थकहरुले माइतीघर मण्डलामा प्लाष्टिक ओढेर प्रदर्शन गरेका हुन्।
उनीहरुले लुटतन्त्र बन्द गर, हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा हामी डा. केसीको साथमा जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन्।
यसअघि पनि डाक्टर केसीको समर्थनमा बिभिन्न शैलीमा माइतीघरमा प्रदर्शन भइरहेको छ।